China Tilikambo fiakarana mihidy mihodina miampita mikoriana / mpamokatra mpametaka volo mihodina mpamokatra | Yubing
Toetoetran'ny tilikambo fihenan'ny faritra mihidy:
Ny firafitry ny famolavolana ny maha-olona miaraka amin'ny varavarana fidirana be loatra (azo hidiana) ary toerana anatiny ampy, ny mpiasan'ny fikolokoloana dia afaka miditra ao anaty tilikambo ho an'ny fizahana sy fikojakojana isan'andro na inona na inona fitaovana mihodina na mihidy.
Noho ny rivotra maina mangatsiatsiaka sy ny fikorianan'ny rano amin'ny lalana mifanitsy aminy, ny faritra ambonin'ilay fantsona dia nalain'ny rano famaohana tanteraka hisorohana ny toerana maina izay hiafara amin'ny fametrahana tahiry. Ary ny maripanan'ny rano famaohana dia ambany noho ny maripana mihena izay mampihena be ihany koa.
Fampisehoana fifanakalozana hafanana tena tsara
Ny cooler loop loop closed dia mihazona teknolojia mitambatra amin'ny coil sy ny fametahana ny fandavana ny hafanana izay nanatsara ny sehatry ny famindrana hafanana hanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra.
ICE Evaporative cross-flow mikiraoka mihidy 'rafitra sy ny singa fampidirana fototra:
Mpankafy axial ety ivelany miaraka amina fahombiazan'ny famolavolana fiarovana telo, fitaovana amin'ny alim-bary alimina sy IP56, motera F entina amina kilasy F miaraka amin'ny rivotra entona izay hanakana ny rivotra sy hampihena ny famoahana.
Rafitra fizarana rano mandroso
Noho ny fikorianan'ny rivotra sy ny rano amin'ny làlan-kaleha dia afaka mandinika sy mitazona mandritra ny fizotran'ny fihazakazahana izy io.
Namboarina tamin'ny vy tsy misy fangarony 304 izay voasokajy ary nandalo in-3 2.5mpa famatrarana tsindry hahazoana antoka ny fahombiazany.
Safidy tsy maintsy atao amin'ny fanisana indray ny fitsaboana rano.
Namboarina sy namboarina tamin'ny PVC mba hampidina ny maripanan'ny rano famaohana izay hisorohana ny refy ary ny famenoana dia mampitombo ny fahombiazan'ny rafitra amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fanjifana rano amin'ny fampitana hafanana tsara kokoa.
Fitaovana mangatsiaka ICE misy paompy sentrifugal voaisy tombo-kase.
Ny volavolan-tehezana (mitongilana mankany amin'ny fivoahan'ny fandotoana ny loto) sy ny fantsom-by vy tsy manara-penitra dia hanatsara ny fihoaran-drano sy ny fandotoana ny loto miaraka amin'ny fanadiovana ireo loto sy loto ao anaty tavy.
Previous: Towers fanamafisana vita amin'ny volavolan-dalàna miaraka amin'ny fisehoana mahitsizoro
Manaraka: Towers fanamafisana mihodina mihodina-mihodina-counter / Cooler mihodina mihodina-etona
Famaritana ara-teknikan'ny tilikambo fiampangana mihidy mihodina-mikoriana
Fidirana fantsona / fivoahana
Masoera mihodina mihidy
Tilikambo fiampangana mihidy
Tilikambo fiampangana mihodina mihidy
Tilikambo mangatsiaka mihidy
fiampitana mihidy mihodina mihodina
Tilikambo fijanonana mihidy mihombo-mikoriana
Cooler mihidy evaporative
Tilikambo mitafo mangatsiaka mihidy
Tilikambo fanamafisam-peo mihidy vita amin'ny rano